Semalt विशेषज्ञ - कसरी वर्डप्रेस टिप्पणी स्पाम संग डील गर्ने?
स्प्याम टिप्पणी गर्नुहोस्, स्पामिंगको रूपमा पनि चिनिन्छ, एक WordPress साइटमा बट्स र बेकारका शब्दहरूको अस्तित्व द्वारा विशेषता हो। टिप्पणी स्प्यामको प्रयोग ब्याकलिks्कहरू सिर्जना गर्न गरिन्छ, र यो व्यापक रूपमा प्रयोग हुने कालो टोपी एसईओ प्रविधिहरू मध्ये एक हो। ह्याकरहरू र स्प्यामरहरूले उनीहरूको वेबसाइटको रैंकिंग सुधार गर्न र वित्तीय लाभको लागि लंगर पाठहरू विकास गर्न ईन्टरनेटमा स्पाम टिप्पणीहरू फैलाए।
जे होस्, Segt का एक अग्रणी विशेषज्ञ Igor Gamanenko, यहाँ ब्लॉगरहरू र वेबमास्टरहरूको लागि टिप्पणी स्प्याम विरूद्ध लड्नका लागि तरिकाहरू परिभाषित गर्दछ। अकिस्मेट, रेफरर बाउन्सर र चुनौती जस्ता प्लगइनहरू सबै प्रकारका स्पाम टिप्पणीहरू ब्लक गर्न उपयोगी र सहयोगी हुन्छन्।
१. क्लीनटल्क द्वारा एन्टि-स्प्याम:
उत्तम पक्ष यो हो कि यो प्लगइन प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छ, कुनै क्याप्चा छैन, र स्प्याम-मुक्त टिप्पणीहरू र दर्ता फारमहरू सुनिश्चित गर्दछ। यद्यपि यस प्लगइनको प्रीमियम संस्करणमा असाधारण सुविधाहरू छन्, र यसले स्प्यामबट साइनअप, पिंगब्याक, र ट्र्याकब्याक सजीलै रोक्दछ। यस प्लगइनले ठ्याक्कै अकिस्मेटले कार्य गर्दछ र सबै आगमन टिप्पणीहरू फिल्टर गर्दछ, प्राय जसो स्पाम टिप्पणीहरू यसको क्लाउड सर्भरमा अपलोड गर्दछ जहाँ तिनीहरू मेटाइनु अघि केही दिन राखिन्छ। प्रीमियम संस्करण १ 15 दिन नि: शुल्क परीक्षण प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं यसको सबै सुविधाहरूसँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ, र मूल्य प्रति वर्ष $ १० सम्म छ।
२. व्याG्ग गार्ड:
यो अर्को प्रिमियम WordPress प्लगइन हो जुन तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। WangGuard मूलत: क्लाउड भण्डारण एन्टि-स्प्याम प्लगइनका साथ धेरै उत्कृष्ट सुविधाहरू र एक स्प्याम मान्यकर्ता हो। यो Akismet जस्तै काम गर्दछ र संदिग्ध IP ठेगाना तुरून्त रोक्न मद्दत गर्दछ। यस प्लगइनको नि: शुल्क संस्करणमा सीमित सुविधाहरू छन्, र तपाइँ केवल पाँच हजार टिप्पणीहरू रोक्न र जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, प्रीमियम संस्करणसँग विभिन्न एड्-अनहरू छन् जस्तै ब्ल्याकलिस्ट गरिएका शब्दहरू, मेलपोजीट कनेक्टर र अन्य। यसको प्रीमियम संस्करण पहुँच गर्न तपाईले प्रति वर्ष करीव $ १ pay तिर्नुपर्नेछ, जुन स्थापना गर्न सजिलो छ र कुनै पनि समयमा सक्रिय हुँदैन।
Anti. विरोधी स्पाम माहुरी:
यो अझै अर्को प्रीमियम वर्डप्रेस प्लगइन हो जुन तपाईंको ब्लग वा वेबसाइटबाट स्पाम टिप्पणीहरू हटाउन सक्दछ। एन्टी-स्प्याम बी निजी र व्यावसायिक उद्देश्यका लागि उत्कृष्ट छ। अकिस्मेट विपरीत, यस प्लगइनलाई कुनै पनि प्रकारको रेजिष्ट्रेसनको आवश्यक पर्दैन र तपाईंको कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि क्लाउड-संचालित स्प्याम पत्ता लगाउने एल्गोरिथ्म प्रयोग गर्दैन। यसका केहि सुविधाहरू IP ठेगानाको प्रमाणीकरण हो, नियमित अभिव्यक्ति, स्प्यामर IP हरू अवरुद्ध गर्दै ग्रेवाटर र अन्य।
W. WP-SpamShield Anti-Spam:
यो एक प्रसिद्ध प्लगइन हो जुन दुबै निःशुल्क र सशुल्क संस्करणहरूमा उपलब्ध छ। यो एक डबल-स्तरित सुरक्षा सेवा को उपयोग गर्दछ र स्पाम टिप्पणी बाट तपाइँको WordPress वेबसाइट र ब्लग बचाउँछ। प्राथमिक तहले जाभास्क्रिप्ट र वेब कुकिजको मिश्रण समावेश गर्दछ जसले स्प्याम बट्सलाई स्वचालित रूपमा रोक्न सक्दछ। यसको माध्यमिक तहले बोटहरू हटाउनको लागि प्रबन्ध गर्छ जुन अकिस्मेटलाई हटाउन मद्दत गर्दछ र लामो समयदेखि तपाईंलाई ईरिट गर्दैछ।
WordPress. WordPress WordPress शून्य स्प्याम:
यो प्लगइन दुबै निःशुल्क र सशुल्क संस्करणहरूमा पनि उपलब्ध छ र डेभिड वाल्श द्वारा विकसित गरिएको हो। यसले तपाइँको वेबसाइटबाट स्पाम टिप्पणी हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र दुबै निजी र व्यवसायिक वेबसाइटहरूसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ। यसले निन्जा फार्म, बुडीप्रेस र ग्रेभिटी फारमहरू जस्ता अन्य प्लगइनहरूसँग पनि राम्रोसँग काम गर्दछ।